Fifampiarahabana eny Iavoloha : Miisa 1 400 ireo vahiny nasaina -
AccueilRaharaham-pirenenaFifampiarahabana eny Iavoloha : Miisa 1 400 ireo vahiny nasaina
Fotoana iray manamarika ny taona vaovao ny fifampiarahabana izay tanterahina eny amin’ ny lapam-panjakana Iavoloha, ary fotoana ihany koa hiarahaban’ny filoham-pirenena malagasy ny vahoaka rehetra manerana an’i Madagasikara. Nasaina eny avokoa noho izany ireo tompon’adraikitra maro eto amin’ ny firenena, izay hitondra ny anjara birikin’izy ireo ihany koa amin’ ny fiarahabana ny filoham-pirenena, izay raiamandreny eto amin’ ny tany sy ny firenena. Anisan’ny nasaina ihany koa hanotrona ity lanonana ity ireo filoha izay nifandimby teto amin’ ny firenena, ary samy efa nahazo ireo fanasany avy. Raha ny isan’ireo izay nasaina kosa dia mitovy amin’ny tamin’ny herintaona ihany, izay eo ho eo amin’ ny 1 400. Ankoatra ireo izay tompon’andraikitra maro eto amin’ ny firenena moa dia eo ihany koa ireo masoivoho vahiny izay monina sy miasa eto Madagasikara, izay tsy nanavahana na dia iray, ary manampy azy ireo ny filohan’ ny fiangonana izay misy eto Madagasikara.
Araka ny fantatra dia hanomboka amin’ ny 11 ora eo ho eo ny lanonana eny amin’ ny lapam-panjakana Iavoloha, ary amin’ny 10 ora kosa no hiditra hanokatra ny lanonana ny filoha Rajaonarimampianina hery mivady. Araka izany dia ho tonga mialoha izay lera voatondro izay avokoa ireo izay nasaina rehetra hanotrona ny lanonana. Raha ny fandaharam-potoana dia tahaka ny mahazatra ihany, satria dia hisy ny fandraisam-pitenena ataon’ireo filohan’andrim-panjakana mifandimby, ary hamarana izany ny an’ny filoham-pirenena malagasy izay andrasan’ny maro. Aorian’ izay rehetra izay kosa no hiroso amin’ny fiaraha-misakafo ny rehetra, izay fotoana ihany koa hisian’ ny firariantsoa ataon’ireo izay nasain’ny filoham-pirenena. Ao anatin’ izay ihany koa no hanafanan’ireo artista izay nasaina ny lanonana ,raha tsiahivina ny tamin’ ny heritaona , dia mozika mampiseho ny maha malagasy no nibahana , ary nampihanoka ny rehetra ao anatin’ ny lanonana.
Kabary izay andrasan’ny besinimaro tokoa raha ny kabary izay hotanterahin’ ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ ny maha taom-pifidianana ity taona ity, ary tsy hohadinoina ihany koa araka ny efa natsidiny tao anatin’ ny fotoam-bita dia ny fijerena hatrany izay hahasoa ny vahoaka malagasy eo amin’ ny lafin’ny sosialy sy ny lafiny ara-ekonomika. Ankoatra izay dia manamarika ny kabarin’ny filoha ihany koa ny hitondrany ny vina ny taona hitsahana eo amin’ny lafin’ny fampandrosoana. Ny fanontaniana mipetraka kosa dia ny hoe hanao ahoana indray ny kabary izay hotanterahin’ny solontenan’ny masoivoho malagasy izay monina sy ny miasa eto amintsika, satria maro no tohana tamin’ ny kabary nataon’ny solontenan’ izy ireo izay miditra amin’ny fiainam-pirenena malagasy herintaona lasa izay . Ankoatra izay moa dia hisy ihany koa ny fandraisam-pitenenana izay ataon’ I Rivo Rakotovao amin’ ny filohan’ ny sénat azy, Jean Max Rakotomamonjy filohan’ny antenimieram-pirenena.